Excellent Tips About Hutungamiri Kuti uchada Verenga – JobDescriptionSample
musha / Tips / Excellent Tips About Hutungamiri Kuti uchada Verenga
Excellent Tips About Hutungamiri Kuti uchada Verenga
superadmin Kubvumbi 18, 2016 Tips Leave mhinduro 289 Views
Wati riri rako kuzviremekedza mu Muchiitiko nzvimbo vamwe vanhu vaitarisira kuti uve mutungamiri asi iwe kukwanisa kuratidza zvibereko utungamiri unyanzvi? Unofanira kupedza mubereko kana uchinyatsoda hatitombodi kuva akapfuura zvinopfuura kamwe zvakare. Nyaya inotevera kuratidza iwe zvainoda kubatsira anosanganisira utungamiri nezvaanogona wako pachako daily upenyu.
In Buy kuva mutungamiri zvinoshamisa, unofanira kuva vakatendeseka. Somutungamiriri, maifanira kuva kuita mukuedza kutungamirira vanhu vari chakanakisisa kosi. Vateveri ako achaona kuvimbika kwako uye achawana. Iwe kazhinji anofanira kuedza kuvimbika nevanhu venyu, sezvo zvinofanira kuchinja navo vakananga kuvimbika sezvo zvakanaka.
Kuvimbika ichocho kunokosha kuti mumwe mutungamiri. Vatungamiri anobudirira yakavimbika. Paunenge uchishanda nezvaanogona venyu utungamiri, nechokwadi muri kuramba vakaperera pamwe pachako uye nevamwe vanhu. Murume kana mukadzi achava zvakawanda kuremekedza iwe kana vanosvika sokuti vanogona kuvimba uye kutenda iwe.
tsika dzako kuita chinhu chinokosha nzvimbo kutsausa mugomba mutungamiri wakanaka. Iva nechokwadi kuti achava comfy pamwe zvaunosarudza. Kana uchitenda kuti kutsunga achaita rokurwadzisa iwe, chengeta kure kuburukira nzira kuti. Kunyange kuchava varume nevakadzi vane yakasiyana akagadzirwa tsika ikoko, unofanira kuva zvakanaka zvauri kuita zvakarurama nyaya.
Kuti uve mutungamiri zvebhizimisi yakanaka chaizvo, unofanira hakuna nzira yokuderedza tsika yako chete kukwikwidzana. Kana ukawana hamungambovi kufarira chii makwikwi wako kuita, ipapo zviri kwauri yokutsvaga imwe nzira asi zvakadaro kuva kwikwidzana. Pane nzira kukwikwidzana pasina kudzikira kwako zvinodiwa. Kana iwe edza matsva nzira kugara mutambo, unogona kufara.
Kufunga chikwata wako zvechokwadi kutsoropodza ave mutungamiri. Ita basa rakaoma kuverenga pamusoro sei kupa kurudziro nokusika achifuridzirwa mune vanhu here kutungamirira. Serimwe rinogona kutsiva kuisa mugove kupfura mumwe nomumwe mabasa, afuridzire boka kuti tiite zvakanaka.
Iva nechokwadi kuti une zvinangwa kuisa wenyu bhizimisi somunhu kwakakwana. vanhu vose vanoda kuva chinhu vanogona kupfura kuti, uye mutungamiri mukuru kucharuramisa vashandi vavo kuti mirayiridzo. Haugoni chete kupa vanozivisa uye vanofunga kuti renyu basa yapera. Akabata mwedzi nomwedzi chinangwa misangano nezvechimwe wose mberi.
Unofanira kuwana nguva rimwe zuva yokuongorora uye kuongorora mafungiro uye zvakatipoteredza kubasa. Upinze dzimwe dzenyu pasi kuti muzive zvavanofunga chaizvo. Ngaawone audzwa, kutaura okunatsiridza kuti zvinofanira akasika uye ushande kukudziridza ukama.
Vatungamiri teerera zvinopfuura kungotaura. Kuva Mutungamiri mukuru zvose kunzwa chii vamwe vanotii. Teerera vanhu kuita basa pasi iwe. Izvi ine nyaya dzavo newe. Edza chii mushandi ose ari pamusoro zvakaita chinhu kwakafanana uye sei vanhu vari kushandisa nayo. Unogona kushamisika sei yekudyidzana iwe uzive nokuteerera.
Vatungamiriri simba kunzwisisa utera yavo nesimba. Kana iwe uri vanozvirumbidza, iwe vachakundikana. Kubhadhara kunze nehanya kunzvimbo uchida kusimbisa.
Very yavo kusvika paunokanganisa. No munhu zvakanaka. Pakuva kusvika paunokanganisa, uchivagadzirisa uye kudzidza kubva kwavari ari mukuru unhu mutungamiri mukuru. Richaita kuratidza kuti uri munhu, sezvo ivo. Unenge pakubvuma kutadza vakakoniwa kutarisisa chikuru, zviri anozvininipisa uye vanoremekedzwa.
Kana chikanganiso anotora nzvimbo, Mutungamiri mukuru achashandisa kuitika sezvo mukana kuti awane chimwe chinhu, pachinzvimbo mukana kutsoropodza. Kukurukura kuomerwa uye kuti ringakurirwa sei zvichava kuvatsigira kwazvo.
Ita nechivimbo uri nguva dzose kutarira kuwana kuvatsva utungamiri nemano. Wana zvimwe zvidzidzo kana kuenda Mumusangano musi chaiwo hwaro kunzwisisa unyanzvi hutsva sei kutungamirira zvakanaka. Kune nzira kazhinji itsva kunzwisisa uye mano kuti vawedzere. Ita nechivimbo kuchengetedza akubvumira kukwira kwokuwirirana.
Vashandi vanofungidzira vatungamiri vavo kutaura zvakanaka. Kuteerera kuri zvikuru dzinonetsa katsika mutungamiriri. Dzivisa warasa vashandi kana kunyepedzera kuti murege kunzwa zvavanenge vachida kutaura. Kana mumwe anonyunyuta, kuteerera zvavanotaura.
Ongorora chimiro chako pamukova, uye haana kuchengetedza kure yako kubva vashandi. Haamiriri akaisa kuzviremekedza pamusoro boka, kunyange kana uri makuru rimwe boka revanhu. Havaedzi panze kuita zvose zvenyu kuzviremekedza. Pakupedzisira, vashandi venyu ndiko kunoita kuti iwe kana kuti anouraya iwe, saka kuva nechivimbo zvachose wose anonzwa dzinonetsa.
utungamiri Good kunokosha kuti kubudirira mumwe akasimba. Kunyange zvakadaro, kana musingadi kuziva utungamiri mitemo, iwe arege kunge unogona kuva mutungamiri chaiye. Tinovimba kuti dambudziko zvinogona kugadziriswa this post.
pashure Uchapupu mukoti Job Description Mharidzo
Next Site Inspector Job Description Mharidzo